Xulka Qaranka Koofurta Sudan Oo Ciyaaray Kulankoodii Ugu Horeeyay Kadib Xornimadii
Xulka kubadda cagta Koofurta Sudan ayaa tan iyo markii xiriirka fifa uu aqoonsaday ay ciyaareen kulankoodii ugu horeeyay waxana ay la kulmeen dalka Ugandha.
Xidigaha xulka Ifaya ee Koofurta Sudan ayaa ciyartoodii ugu horeysay waxay bar baro ah la galeen dalka Ugandha.
Kulanki ugu horeeyay ayay xidigaha dalka Koofur Sudan bar baro ay la galeen dalka ay dariska yihiin ee Uganda waxana ay kuso idlaatay 2-2.
Uganda oo ah dalka ah horyaalka bariga iyo bartamaha afrika ayaa ciyaar aad u xiiso badan kula soo ciyaaray xulka South sudan magaalada xarunta ah ee Jubba.
Ciyaartaan oo ahayd mid loo dabaal dagayay sanad guuradii 1-aad ee marka ay noqden dal madax banaan ah.
Dalkaan oo uu tababare u yahay nin u dhashay dalka Serbia kaas oo sameeyay ciyaar difaaceed culus oo ay weeraryahanada dalka Uganda ay dhaafi kaari waayen.
Sidoo kale dalka Sudanta koofureed waxay horey u cadaysay inay ka qeyb galayso tartanka Cecafa.
Kulanki ugu horeeyay ayay xidigaha dalka Koofur Sudan bar baro ay la galeen dalka ay dariska yihiin ee Uganda waxana ay kuso idlaatay 2-2. Uganda oo ah dalka ah horyaalka bariga iyo bartamaha afrika ayaa ciyaar aad u xiiso badan kula soo ciyaaray xulka South sudan magaalada xarunta ah ee Jubba. Ciyaartaan oo ahayd mid loo dabaal dagayay sanad guuradii 1-aad ee marka ay noqden dal madax banaan ah. Dalkaan oo uu tababare u yahay nin u dhashay dalka Serbia kaas oo sameeyay ciyaar difaaceed culus oo ay weeraryahanada dalka Uganda ay dhaafi kaari waayen. Sidoo kale dalka Sudanta koofureed waxay horey u cadaysay inay ka qeyb galayso tartanka Cecafa.